“Koeman waa tababaraheena, dhammaanteena waan ka danbeyneynaa” – Laporta – Gool FM
Dajiye September 23, 2021
(Barcelona) 23 Sebt 2021. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta oo ka soo muuqday shir jaraa’id maanta oo khamiis ah, ayaa wuxuu garab istaag weyn u muujiyay macalinka reer Holland ee Ronald Koeman, isaga oo ka hadlay cadaadiska saran, wuxuuna codsaday in waqti la siiyo.
Joan Laporta oo la hadlay warbaahinta kahor ciyaarta ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Cádiz CF horyaalka La Liga, ayaa sheegay in guddiga uusan iska ilaalin doonin inay qaataan go’aamo adag haddii baahi timaaddo, wuxuu intaas ku daray inuu doonayo in kooxdu ay si wanaagsan wax u qabato oo ay yeelato kubad wanaagsan.
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta oo la hadlay maanta oo Khamiis ah warbaahinta ayaa wuxuu yiri:
“Mustaqbalka Koeman caawa lama go’aamin doono, waa tababaraha Barcelona waxaana dooneynaa in wax walba ay si wanaagsan ugu socdaan isaga.”
“Marka laga hadlayo Barcelona, ​​waxay sidoo kale la xiriirtaa qaabka aan u ciyaarno iyo qaab ciyaareedka. Laakiin Koeman waa tababaraheena maanta dhamaanteen waan ka danbeyneynaa.”
“Annaga (guddiga maamulka) wax dhibaato ah ma qabno markaan qaadanno go’aanno, waana inaad marmar samaysaa, haddii aan u baahano, hadday tahay mid dhaqaale, mid isboorti ama mid bulsheedba waan sameyn doonaa.”
Barcelona ayaa haatan ku jirta kaalinta sideedaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga, iyadoo leh siddeed dhibcood afar kulan oo ay ciyaartay, waxayna siddeed dhibcood ka hooseysaa Real Madrid oo ciyaartay lix kulan.